Rita, Writing for My Sake!: မီ - Myanmar Books Catalogue
Posted by Rita at 5/07/2010 11:46:00 PM
ကိုယ်လည်း မီ ဖတ်ပြီး ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ နွမ်းလျသွားတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား။ ဟုတ်တယ် ... ဦးသော်ဆွေနေရာက ရေးပေမယ့် တစ်လျှောက်လုံး မီ နေရာကနေ ခံစားခဲ့ရတာ။ အဲလို ခံစားရတာကို သဘောကျမိတာတစ်ပိုင်း၊ မီ့အတွက် ခံစားရတာတစ်ပိုင်း ခံစားချက်နှစ်မျိုးကွဲနေပေမယ့် ကြည်အေးဝတ္ထုတွေထဲမှာ မီ ကိုကြိုက်တယ်။
ကြည်အေး ကို အရမ်းသဘောကျတယ် ..တစ်ချို့ စာကြောင်းတွေ အလွတ်တောင်ရရဲ့။
I like all of ကြည်အေးဝတ္ထု.
Thanks for your review related မီ.
ဒါပေမယ့် စာတပုဒ်မှာ ပြောချင်တဲ့ ပွိုင့်တွေကို ဆွဲမထုတ်ခင် အဲဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကို သဘောလောက် ရေးပြရင် မဖတ်ဖူးသေးသူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေကို ဟိုဘက် site မှာ ရေးတုန်းက မဖတ်ဖူးသေးတဲ့သူတွေ အတွက်ထက် ဖတ်ဖူးပြီးသားသူတွေနဲ့ discuss လုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ ရေးချင်ခဲ့တယ်။ (discuss လုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ ဝင်မသွားဘူး။ ကိုယ်ပြောချင်ရာ ပြောလိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ ဝင်သွားတယ်)
ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း မဖတ်ရသေးတဲ့စာအုပ်ကိုဆို ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းဖတ်ပြီးမှဆိုရင် တကယ်ဖတ်တဲ့အခါကျ လျော့သွားတယ်လို့ ထင်မိတတ်တယ်။ တချို့ဆို အကျဉ်းချုပ်ရေးတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါဖတ်ပြီး ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ ခံစားရတာနဲ့ တကယ့် မူရင်းစာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ကျ သိပ်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ (ဥပမာတခုပြောရရင် အောင်ဖြိုး ဘလော့ဂ်မှာ မကြာခင်ကမှ ဖတ်ခဲ့မိတဲ့ ခင်ခင်ထူး ရဲ့ မင်္ဂလာလှည်း)
ဒါ့ပြင် အဲလို အကျဉ်းပြန်ရေးဖို့က ကျွမ်းကျင်ဖို့လည်း လိုတယ် ထင်မိတယ်။ (သူများ အကျဉ်းချုပ်ရေးတာတွေ ဖတ်ကြည့်ရင် ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်း ရေးကြည့်ရင် မလွယ်ဘူး)။ ဆိုတော့... ကိုယ်ရေးလိုက်မှ ပျက်သွားမှာထက်စာရင် ဘာမှ မရေးတာ ပိုကောင်းမလားလို့။
အဓိကကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ရေးဖြစ်တာပါပဲ။ မဖတ်ရသေးတဲ့ စာအုပ်ကိုဆို ဇာတ်လမ်းအကုန် ကြိုမသိချင်တတ်လို့ပါ။ ကြိုသိပြီးလို့ ပြည့်စုံသွားရင်လည်း မဖတ်ချင်တော့လို့ပါ။
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေအကြောင်းရေးတာရဲ့ နောက်မှာ ရှိတဲ့ဆန္ဒက ကိုယ်ဒါကို ဘယ်နားမှာ ဘယ်လိုကြည့်မြင်ခံစားတယ်ဆိုတာ ပြောချင်တာ အပြင်၊ သူများတွေ ဘယ်နားမှာ ဘယ်လိုကြည့်မြင်ခံစားတယ်ဆိုတာ သိချင်မိတယ်။
ကိုယ်ကြည့်မြင်ပြီးသား အရာတစ်ခုကို နောက်ထပ် သူများ မျက်စေ့နဲ့ ဝင်ကြည့်ချင်တာ၊ သူများ စိတ်နဲ့ ဝင်ကြည့်ချင်မိတာလို့ ပြောရမလားမသိဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် ၂ ရက်ကပဲ fb မှာ အောင်ဖြိုးနဲ့ ခင်နှင်းယု စာအုပ်တွေ အကြောင်းပြောမိတော့ သူမြင်တာတွေ ပြောပြလို့ သိလိုက်ရတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ။
(မီ လူသတ်ခဲ့တဲ့ သေနတ်ကို ဦးသော်ဆွေ ရေထဲ လွှင့်ပစ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ထိန်းချုပ်ဆောက်တည်ရာခက်ပြီး ငိုတဲ့ အခန်း။)
မရီတာ အဲဒီအခန်းက ရင်ထိုးလေးကို ဦးသော်ဆွေက အင်းလျားရေကန်လယ်ထဲ လွှင့်ပစ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။
သက်သေပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖျောက်ပေးလိုက်တာပဲ မှတ်မိတော့တယ်။ သေနတ် ထင်နေလို့။
ဖတ်ဖူးပြီးတဲ့သူ အချင်းချင်းသာ ဆွေးနွေးလိုလို့ရေးတာဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ်တွေကို မဖတ်ဖူးတဲ့သူက အလိုလို စည်းအပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားတော့မှာပေါ့...
စာတပုဒ်လုံးကို ဖတ်ပြီး မြင်တတ်ခံစားတတ်တဲ့ အဆင့်ကိုတောင် ရောက်နေပြီ ဆိုမှတော့ ရီတာ အကျဉ်းချုပ်ရေးလို့လည်း မူရင်း အဓိပ္ပာယ် ပျောက်သွားလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး...
နောက်ပြီး အကျဉ်းချုပ်ဟာ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဖြစ်အပျက် အကြောင်းကိုသာ အကျဉ်းချုပ်ထားမှာမို့ မူရင်းဝတ္ထုတပုဒ်ကိုဖတ်ရသလို ပြည့်စုံသွားမယ်လို့ မမျှော်လင့်မိဘူးလေ...
တကယ်လို့ စာဖတ်သူက စာပေရဲ့ ရသကို မခံစားလိုဘဲ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကိုပဲ သိချင်လို့ ဖတ်တာဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့...
တချို့စာအုပ်တွေဆိုရင် နှစ်ခေါက်သုံးခေါက် ဖတ်ပြီးသားပေမယ့် အဆင်သင့်တိုင်း ထပ်ထပ်ပြီး ပြန်ဖတ်ချင်နေတာမျိုး... ပြန်ဖတ်တိုင်းလည်း ပထမဦးဆုံးဖတ်ရသလို ပြန်ပြန်ပြီး ခံစားရသလိုမျိုး...
(ကြောက် ကြောက်နေမိတယ် ဆိုပေမယ့် ပြန် ပြန်ဖတ်မိတာပါပဲ)
ရီတာ့ရဲ့ review ကိုဖတ်ပြီး မူရင်းစာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ် တဖွားဖွားပေါ်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်တယ် ဆိုရမှာပေါ့...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုတိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ကြောင်း သုံးကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အကျဉ်းချုပ်လေးတော့ ပါစေချင်တယ်ဆိုတာ ဆန္ဒပြုတာပါ...
အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုလူထွေး။